May 2021 – Shwe Likes
G Shwe | May 31, 2021
အင်းစိန်ေ ထာင်မှာ ဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့ သရုပ်ဆော င် ရဲတိုက်နဲ့ မော်ဒယ်ပို င်တံခွန်တို့ကို စစ်ကောင် စီက ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နဲ့ မီဒီယာတွေပေါ်က အထောက် အထားတွေနဲ့ တရားစွဲထားတာဖြစ်ပြီး တရားလို ကိုစစ်ပြီးမှ အာမခံလျှော က်မယ်လို့ သူတို့ရဲ့ဥပဒေအကြံပေးက ပြောပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ရဲတိုက်ကို လသာရဲစခန်းက ပုဒ်မ ၅၀၅(က) ၊ မရမ်းကုန်းရဲစခန်းက မူးယစ်ပုဒ်မ
ဂီတလော ကမှာ အချစ်တေး သီချင်းကောင်းေ လးတွေကို သီဆိုရ င်းပရိတ်သတ် အားပေး မှုတွေကို အပြည့်အဝရရှိထား တဲ့ပြည်သူ ချစ်တေးသံရှင်တ စ်ယောက်ဟာ ဆိုရင်တော့ အိမ့်ချစ်ပဲဖြစ်ပါတ ယ်နော်။ လူငယ်ပီပီ တက်ကြွဖျက်လတ်ပြီးပွင့်လင်းတဲ့ သူမရဲ့အမူအ ရာေ လးတွေဟာ ဆိုရင်လည်း ပရိတ်သတ် ကိုဆွဲဆောင်ထားတဲ့အ ချက်တစ်ချက်ဆိုရင် လည်းမမှားပါဘူးနော်။ အိမ့်ချစ် ဟာဆိုရင်
Morisaki Win ဟာ မြန်မာနိူင်ငံဖွားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဂျပန်မှာကြီးပြင်းလာခဲ့သည့်အတွက် မြန်စကားနဲ့ စိမ်းနေပြီး၊ မြန်မာစကား မပီတာလေးကို ပရိတ်သ တ်တွေက သဘောကျကာ အားပေးမှုအ များအပြား ရရှိခဲ့ပြီး၊ မြန်မာနိူင်ငံမှာ ပွဲပေါင်းများစွာနှင့် ရုပ်ရှင်စကားများ ရိုက်ကူးခဲ့ရပါတယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့အားပေးမှုကြောင့် နိူင်ငံခြားထိပါ ဒေါ်လာသန်းချီတန်တဲ့ ဇတ်ကားကို ရိုက်ကူးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အာဏာသိမ်းပြီးအချိန်ကနေစပြီး Morisaki Win ဟာ
ဧရာဝတီဘဏ္ ATM စက္မ်ားကို ေငြသားျဖည့္တ င္းကာ ေန႕အလိုက္ ရရွိနိုင္မည့္ လိပ္စာမ်ားကို Telegram ႏွင့္ Viber တို႔တြင္ ေဖာ္ျပေ ပးလ်က္ရွိပါသည္။ ဧရာဝတီ ဘဏ္မွ အဆိုပါ ATM ေနရာမ်ားတြင္ တိုကင္စနစ္ (လုံးဝ) မျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း အသိေ ပးအေၾကာင္းၾကားအ ပ္ပါေၾကာင္း လူမရွိဘဲ ေနရာဦးထားျခင္း၊ တစ္ႀကိမ္တြင္ကတ္
လက်ရှိ မှာ အောင်ြ မင်လျက် ရှိနေတဲ့ photo model တစ်ေ ယာက်ဖြစ်ပြီး ချစ်စရာ ကောင်း လွန်းတဲ့ မြန်မာဝ တ်စုံလေးေ တွနဲ့ social media လောကမှာ ခေတ်စား နေပြီး မြန်မာဝတ်စုံ ပုံရိပ်လေးေ တွကို လူမှုကွန်ယက်စာမျ က်နှာထက် ကို တင်ပေးလေ့ရှိတဲ့ ခင်ရတီသင်း
သရုပ်ေ ဆာင် လူပျိုကြီး ခန့်စည်သူ ကို အားလုံး သိကြမယ် ထင်ပါတ ယ်နော်။ သူကေ တာ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့ အာဏာ သိမ်းခံရတဲ့ နေ့ကစပြီး Facebook ပေါ်ကနေ အချိန်အြ ကာကြီး ပျောက်သွား ခဲ့တာပါနော်။ အနုပညာရှင်ေ တာ်ေ တာ်များများ ဆန္ဒပြနေချိန် မှာတောင်
အိချောပိုရဲ့ ဖခင်… ဦးပန်ဒိုရာကြီးဟာ သားမက်လောင်းဖြစ်သူ ကျော်ကြီးကို ဧည့်ခန်းထဲမှာစကားပြောဖို့လာရင်း ဧည့်ခန်းထဲမှာ ယင်ကောင်တစ်ကောင်တွေ့လိုက်တာနဲ့… 🥸” ဟဲ့ မိစုရေ… ဧည့်ခန်းထဲမှာ ယင်ကောင်တစ်ကောင် ဝင်နေတယ်… နင်တို့မတွေ့ကြဘူးလား … အင်းဆက်ကေလာဗူး ယူလာခဲ့စမ်း ” လို့ ပြောလိုက်ပါတယ် ။ 🤠အဲဒီအခါမှာ… ကျော်ကြီးက အင်မတန်တည်ကြည်လေးနက်တဲ့ မျက်နှာပေးနဲ့ 🧓” ယင်ကောင်ကို
တစ်သောင်းတန် သတင်းနဲ. ပတ်သက်ပြီး သတိပြုရမည့်အချက် တစ်သောင်းတန် မယုံရဘူး ဆိုတဲ့ သတင်းက မဖြစ်နိုင်ဘူးလို. ထင်ပါတယ်။ ဒီရက်ပိုင်း လူအတော်များများက တစ်သောင်းတန် သတင်းတွေ အကြောင်းပြောလာကြပါတယ်။ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ အရ ဘဏ်တွေပြိုလဲမှာ မဟုတ်ဘူး ဘဏ်အပ်ငွေတွေ မဆုံးဘူးလို့ပြောတာတွေ့မှာပါ။ ဘာလို.လဲ ဆိုတော့ ဝန်ထမ်းတွေ လစာပေးဖို ခက်မှာမို့လို့ပါ။ အဲ့လို
ထူးထူးဆန်းဆန်းသတင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ မင်းသမီးချော စံရတီမိုးမြင့် ရဲ့ အဝေးကချစ်သူ
မင်းသမီး စံရ တီမိုးမြင့်တ စ်ယောက် ချစ်သူရတာ တစ်နှစ်ေ ကျာ်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပရိသတ်တွေကို ချပြထားတာ အားလုံးလည်း သိကြမယ် ထင်ပါတ ယ်နော်။ သူ့ကောင်လေးဟာ ဘန်ကောက်တွင်နေထိုင်ပြီး စံရတီမိုးမြင့်နဲ့ အပြင်မှာ တစ်ခါမှ မဆုံးဖူးသေးဘူးပါတဲ့နော်။ ဒီနေ့တော့ စံရတီမိုးမြင့်ချစ်သူဆိုတဲ့ နောက်ကွယ်ကအကြောင်းတွေ ထွက်လာပါပြီနော်။ စံရတီမိုးမြင့်ရဲ့ ကောင်လေး နေလင်းခန့်ဆိုသူဟာ အမှန်တကယ် အပြင်မှာ
ဖေဖော်ဝါရီ လ ကတည်းက စတင်ခဲ့တဲ့ နွေဦးတော်လှ န်ရေးမှာဆိုရင် ပြည်သူချစ်အနု ပညာရှင်ေ တွကလည်း တစ်ထောင့်တစ်ေ နရာကနေပါဝင်အားြ ဖည့်ပေးကြတာြ ဖစ်ပါတယ်။ လူရွှင်တော်ေ ကာင်းကျော်တို့ သဘင် အနုပညာသ ည်အဖွဲ့ ကတော့ လူထုလှုပ် ရှားမှုတွေမှာ အားကြိုး မာန်တက်လှုပ်ရှားခဲ့ကြ တာဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာဆိုရင်လူ ရွှင်တော်ကြီး ဦး ငြိမ်းချမ်း